| အခမဲ့အခမဲ့ဒေါင်းလုပ်နေဖို့ APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » လူနေမှုပုံစံစတဲ့ » StayFree - ဖုန်းအသုံးပြုမှု Tracker & သုံးရင်သတိပေးချက်
StayFree - ဖုန်းအသုံးပြုမှု Tracker & သုံးရင်သတိပေးချက် APK ကို
♢အဘယ်အရာ StayFree? StayFree ဖြစ်ပါသည်သင်ကသင့်ရဲ့ smartphone နှင့်သင့်အကြိုက်ဆုံး apps များပေါ်သုံးဖြုန်းမည်မျှအချိန်ကိုပြသခွင့်ပြုတဲ့အမြင်အာရုံနှင့်အသုံးပြုသူ-ဖော်ရွေက Android application ဖြစ်ပါတယ်။ သင်သည်သင်၏ apps တွေအတွက်အသုံးပြုမှုကန့်သတ်သတ်မှတ်ထားနှင့်အသုံးပြုမှုကန့်သတ်ကျော်လွန်သည့်အခါသတိပေးချက်လက်ခံရရှိနိုင်ပါတယ်။ သင်တို့သည်လည်းသင်၏အသုံးပြုမှုအသေးစိတ်နှင့်သင့်သမိုင်း၏စာရင်းဇယားများကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
♢အဘယ်အရာ Stayfree အထူးစေသည်?
►အမြင့်ဆုံးကိုယ်ပိုင်ထိန်းချုပ်ရေး app ကို rated
►အလွန့်အလွန်အသုံးပြုသူဖော်ရွေ interface ကို
အင်္ဂလိပ် / တူရကီ / ဂျာမန်ဘာသာစကားကိုပံ့ပိုးမှု►
အဆိုပါ StayFree interface ကိုသုံးစွဲဖို့တစ်ကယ့်ကိုလွယ်ကူပါတယ်ရှိပါတယ်။
- ပင်မစာမျက်နှာတွင်မျက်နှာပြင်ရဲ့ညာဘက်အောက်မှာ '+' button ကို click လုပ်ပါ။ ထိုအသင်သည်သင်၏သုံးစွဲမှုစာရင်းအင်းများကိုကြည့်ရှုလိုသည့် apps များရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ထိုအခါမျက်နှာပြင်၏ညာဘက်ထိပ်မှာခလုတ်ကိုနေကြပါပြီကိုနှိပ်ပါ။ အခုတော့သငျသညျထိုနေ့ရက်သည်သင့် app ကိုအသုံးပြုဘယ်လောက်ကြည့်ဖို့အဆင်သင့်ရှိပါတယ်။
- နှိုးစက်သတ်မှတ်ထားသို့မဟုတ်သင့်ပါသည်စာရင်းဇယားများ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကြည့်ရှုဖို့အဓိကစာမျက်နှာပေါ်တွင်သင်၏ရှေးခယျြသော apps များကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
- ထိုနှိုးစက် tab ကိုတွင်သင်သည်သင်၏နှိုးစက်တည်းဖြတ်သို့မဟုတ်ဖျက်ပစ်နိုင်ပါတယ်။
- သမိုင်း tab ကိုတွင်, သငျသညျနောက်ဆုံး7ရက်ပေါင်းသုံးစွဲမှုစာရင်းအင်းများကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ သငျသညျလညျးထို tab မှာသင့်ရဲ့သမိုင်း၏ CSV ဖိုင်မှတင်ပို့နိုင်ပါ။
★ App ကိုအသုံးပြုမှုသမိုင်းကြောင်း: သင်ဇယား၌သင်တို့၏သမိုင်း၏စာရင်းဇယားများကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
★ကျော်-အသုံးပြုမှုသတိပေးချက်: သင်အချိန်ကြာမြင့်စွာဖုန်းသို့မဟုတ် apps များပေါ်သုံးဖြုန်းလာသောအခါအကြောင်းကြား။
★ပို့ကုန်မုဒ်: သင့်ရဲ့အသုံးပြုမှုသမိုင်းကြောင်း CSV ဖိုင်သို့မဟုတ် Microsoft Excel ဖိုင်တင်ပို့လျက်ရှိပါသည်။
★ Interface ကိုစိတ်ကြိုက်: ရှိပါသည်5themes များဖြစ်ကြပြီးသင်ကြိုက်နှစ်သက်သောအရာကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ သင်တို့သည်လည်းထိုအချိန်ကာလအသွင်အပြင်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
★ Block ကိုမုဒ်: တစ်ခုကိုသုံးရင်ဖြစ်ပါတယ်ယာယီမဆိုလျှောက်လွှာပိတ်ဆို့။
★ Lock ကိုမုဒ်: settings ကိုပြောင်းလဲရန်အတွက်စကားဝှက်တစ်ခုလိုအပ်သည်။
★ Widget လေး: ပြပွဲတဲ့လူသုံးအများဆုံး App များနှင့်ကောင်းတဲ့ widget ကပေါ်စုစုပေါင်းအသုံးပြုမှု။
★ကြော်ငြာတွေ Remove: ကြော်ငြာမပြသပါလိမ့်မည်။
သင့်ရဲ့ privacy ကိုအကြှနျုပျတို့အားအလွန်အရေးပါသည်။ အားလုံးသင့်ရဲ့ဒေတာကိုသင့်ရဲ့ဖုန်းပေါ်မှာမဟုတ်ဘဲကျနော်တို့ရဲ့ဆာဗာများပေါ်တွင်ထားရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျနော်တို့သာကြော်ငြာများနှင့်ဆိုင်ရာအသိပေးချက်များပေးပို့ဖို့အင်တာနက်ကိုခွင့်ပြုချက်ချင်တယ်။ သင်၏အချိန်သင်ရှိသည်အရှိဆုံးပုဂ္ဂလိကအရာဖြစ်ပြီး, ထိုသို့လမ်းရပ်တည်ရန်အဘို့အကျနော်တို့ရည်ရွယ်!
StayFree နေဆဲအလွန်ငယ်ရွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်သင်၏အထောက်ခံမှုကျွန်တော်တို့ကိုရန်အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ သငျသညျ StayFree ကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းရှိမရှိတစ်ဦးအပ်လိုက်စွန့်ခွာသွားပါ။ သငျသညျကြှနျုပျတို့ကိုယျကိုတိုးတက်စေရန်အလို့ငှာ၌ဤသိရန်လိုပြောင်းလဲသွားရန်လိုအပ်ပါသည်သောအရာကိုကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြနိုင်ပါတယ်။
အမေရိကန် CONTACT ♢
ကျနော်တို့ကအမြဲဘုတ်အဖွဲ့ပေါ်တွင်သင်၏တုံ့ပြန်ချက်ကိုယူဖို့အဆင်သင့်များမှာ! hello.stayfree@gmail.com: သင် app ကိုသို့မဟုတ်ကျွန်တော်ပိုကောင်းဘယ်သို့ပြုနိုင်သည်အကြံပြုချက်များရှိသည်သို့မဟုတ်တစ်စုံတစ်ရာဘာသာပြန်ချက်အကူအညီဖြင့်မည်သည့်ကိစ္စကိုသို့ပြေးလျှင်သင်အမြဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်
keywords: StayFree, Stay အခမဲ့, အချိန်မျက်နှာပြင်, ios12, ဒစ်ဂျစ်တယ်အစားအစာ, လူမှုရေးမီဒီယာစွဲ, ငါ့ကိုထွက်မစောင့်, app ကိုအသုံးပြုမှု, အသုံးပြုမှုသမိုင်းကြောင်း, အချိန်ကန့်သတ်နေ့စဉ် stats, ဖုန်းစွဲ, ဖုန်း-ဘဝချိန်ခွင်လျှာ, အပတ်စဉ်အစီရင်ခံစာရန်မဆိုရမည်မှာ, connect မှန်ကန်မိမိကိုယ်ကိုထိန်းချုပ်မှု, ကုန်ထုတ်လုပ်မှု, စမတ်ဖုန်းစွဲရိုက်နှက်နေ့စဉ်အသုံးပြုမှု, မိဘထိန်းချုပ်မှု, ကိရိယာအသုံးပြုမှုသတိပေးချက်, လူမှုရေးမီဒီယာစွဲ, သုံးရင်သတိပေးချက်, လမ်းကြောင်းအသုံးပြုမှုသမိုင်းကြောင်းရှုမြင်, အချိန်စီမံခန့်ခွဲမှု, ရိုးရှင်းသော, အသုံးပြုသူဖော်ရွေ, ဘက်ထရီဖော်ရွေအများစုတည်ငြိမ်မှုအသုံးပြုမှု tracker app ကိုနှင့်အတူ
*** နယူးအင်္ဂါရပ်များ ***
ပရီမီယံ '' အင်္ဂါရပ်နှင့်အတူ -'Code ဖယ်ရှားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
CSV ဖိုင်မှ -Export ယခုကြော်ငြာအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
-Share စခရင်ပုံ feature ကိုထည့်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
-Now, သင်သည်သင်၏စုစုပေါင်းအသုံးပြုမှုများအတွက်နှိုးဆော်သံကိုသတ်မှတ်နှင့်အဓိကစာမျက်နှာအတွက် '' စုစုပေါင်းအချိန် '' အတန်းမှာစုစုပေါင်းသုံးစွဲမှု၏အသေးစိတ်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
-Internet ခွင့်ပြုချက်, ကြော်ငြာနှင့်ပရီမီယံ mode ကိုထည့်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
-PIN option ကိုထည့်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
-Block နှိုးဆော်သံ type ကိုထည့်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
-2 Widget လေးထည့်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
StayFree - ဖုန်းအသုံးပြုမှု Tracker & သုံးရင်သတိပေးချက်